Dhageyso: Madaxda Galmudug Oo Loogu Baaqay In Khilaafkooda Degdeg Ku Xalliyaan – Goobjoog News
Mid ka mida siyaasiyiinta Galmudug ayaa sheegay inaan loo dul qaada karin sii jiritaanka qilaafka siyaasadeed ee u dhaxeeya madaxda maamulka Galmudug.
Daahir Shidane Cabdi ayaa sheegay in mudada uu jiray is jiid jiidka siyaasadeed ee ka dhaxeeya hogaanka galmudug laga dareemay deegaanada maamulka dadkuna aysan ku niyad sameyn in uu sii jiro.
Dhinacyada siyaasadda isku haya ee maamulka galmudug ayuu ugu baaqay inay sharciga u yaal ku kala baxaan oo aysan deegaanka dhaxalsiin dib u dhac kale isagoo sheegay inay dadka maamulkaani uu kulmiyo ay dhibaatooyin kasoo daaleen.
Shidane ayaa sheegay in hal arrin oo kaliya looga bixi karo khilaafyada jira oo ah in si sharci ah loo wajaho waxa jira, baarlamaankana uu xalliyo wax walbo maadaama ay iyaga horey usoo doorteen madaxdaan.
Ugu dambeyn siyaasi Daahir ayaa ugu baaqay madaxda Galmudug ineysan shacabka niyad jabin oo wax walbo ay xalliyaan iyadoo laga fogaanayo in awood la isku sheegto ama wax lamid ah.
Tanzania: Cabsi Laga Qabo In 200 oo Qof Ku Dhinteen Markab Marayey Lake Victoria
Nktgcc skklab Cialis mail order cialis generic best price
Tskdyx sgqvqx Mail order cialis cvs pharmacy